That's so good, right?: THE MARKET TOILETS
ကျနော်တို့မြို့မှာ ဈေးသက်သာတဲ့ သားရေရှူးဖိနပ်အမျိုးမျိုး၊ Reebok sportswear အတုအမျိုးမျိုးနဲ့ ၀ါဝင်းတောက်ပနေသော လက်ဝတ် ရတနာအတုများကို အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ ဈေးရုံတန်းတွေပေါလှတဲ့ ဈေးကြီးတစ်ဈေးရှိပါတယ်။ ဈေးရုံတွေရဲ့ နောက်ဘက် ညာဘက်ခြမ်း မိုဘိုင်းဖုန်းကာဗာတွေဖြန့်တဲ့ ဆိုင်ရဲ့ဘေးမှာ အမျိုးသားသုံးသန့်စင်ခန်းတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။
အဲဒီနေရာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကျနော်ရောက်တုန်းက အသက် ၂၀ပဲရှိသေးတယ်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကနေ မိဘတွေနဲ့အတူ မြို့လေးကို ပြန်ရောက်တဲ့ နွေရာသီအစောပိုင်းမှာပေါ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးမိရတာကတော့ ကျနော်ဂေးဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်မှုမရှိ သက်သောင့်သက်သာတော်တော် ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။ တက္ကသိုလ်ညများမှာ ကျောင်းက ကောင်မလေးတွေနဲ့ ချစ်တမ်းကစားတာရယ် အခြားသောအရွယ်တူ ကောင်လေးတွေနဲ့ တွဲခုတ်တဲ့ညတွေရယ် ယှဉ်ကြည့်ရရင် ကောင်လေးတွေရဲ့ ချစ်ခင်နှစ်လိုမှုပိုပိုသာသာရခဲ့တာက သိသာထင်ရှား နေသလားလို့။
အပြာရင့်ရောင် တံခါးရွက်ပေါ်မှာ ဖိုင်ဘာပလတ်စတစ်သားနဲ့ထွင်းထုထားတဲ့ အမျိုးသားသင်္ကေတအရုပ်လေးကပ်ထားတယ်။ သူ့ပေါင်ကြားမှာ ဘယ်သူ လက်ကမြင်းသွားလဲမသိ ငပဲပုံကြီးထင်းနေတာ။ သန့်စင်ခန်းလိုနေရာမျိုးမှာ လိင်ကိစ္စအတွက် ဇာတ်လမ်းလာရှာဖွေကြတာ တော်တန်ရုံ သည်းခံနိုင်မှုမျိုးတော့မဟုတ်လောက်ဘူး။
ဆီးသွားထားတဲ့အနံ့ပြင်းပြင်းတွေက ဖြတ်လျှောက်လိုက်တာနဲ့ကို နှာခေါင်းထဲရောက်လာရော။
ဆီးသွားကြွေကမုတ်လေးတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာအဝေးသိပ်မရှိ စိတ်ကျဉ်းကြပ်စရာကို လူလေးယောက်လောက်က တစီတတန်း ရှိနှင့်နေပြီးပါပြီ။
မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံနဲ့လူလတ်ပိုင်း နှစ်ယောက်ကတစ်တွဲ၊ အညိုရောင် ဂျက်ကက် ဆံပင်ဘော်ငွေရောင်နဲ့ လူကြီးကတစ်ယောက်။ အသက် ငယ်ငယ် ကြည့်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကတော့ အားကစားဝတ်စုံနဲ့ဗျ။
ဆီးသွားကြွေကမုတ်တွေနားမှာ မတ်တပ်ရပ်ရုံရပ်နေသူရယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့လက်တွေကို ဘေစင်မှာဆေးကြောနေတဲ့သူရယ် အဲ့ဒါမှ မဟုတ်သေးရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ဟန်ပေါက်နေကြတဲ့လူတွေရယ်များပါတယ်။
ကျနော်ရောက်လာတာကိုပဲ နေရာမှားဝင်လာသူတစ်ယောက်ကိုကြည့်နေကြသလိုကို အားလုံးက ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ်။ ကျနော့်ပါးပြင်မှာ ရှက်သွေးနဲ့ရဲကနဲဖြစ်ရော။
ကျနော် ကျောပိုးထားတဲ့ အိတ်ကို ပခုံးပေါ်ကို ပင့်မလိုက်မိတယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ မသက်မသာခံစားရချိန်များမှာ မကြာခဏလုပ်မိ တတ်တဲ့အမူအယာဆိုတာ ကိုယ့်ဖာသာလည်းသတိထားမိပြီးသားပါ။ သိတော့သိပေမယ့် မကြာခဏဆိုသလို ကျောပေါ်လျှောလျှောကျ တတ်တဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ပခုံးပေါ်ပင့်ပင့်တင်နေမိပါတယ်။
ကျနော် ခပ်သွက်သွက်လေးလျှောက်သွားလိုက်ပြီး အိမ်သာထဲဝင်လိုက်ပါတယ် အကြည့်စူးစူးတွေ မျက်ခွံပင့်ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ ဝေးရာစီကိုပေါ့။
အိမ်သာတံခါးက လော့ခ်ျလုပ်လို့မရဘူးဗျာ ဒုက္ခပါပဲ။ ကျနော် ခပ်သွက်သွက်သေးပေါက်ပြီး ပြန်ထွက်ရုံဆိုတော့ တံခါးရွက်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ထိန်းကိုင်ထားလိုက်တယ်။
ခပ်မြန်မြန်လေးပဲ ဘောင်းဘီထဲကနေ ငပဲကိုအပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ခပ်နိမ့်နိမ့်ကာထားတဲ့ အိမ်သာခန်းနံရံပေါ်ကနေ ကျော်ပြီး မျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။
အဲ့သည့်လူကို ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကျနော်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့မျက်နှာက ကျနော့်ငပဲကနေ စက္ကန့်အတော်ကြာတဲ့အထိ မခွာတော့ဘူး ဗျ။
သူက အနက်ရောင် ဦးထုပ်တစ်လုံးကိုဆောင်းထားသလို ကျနော့်ထက် အသက်နည်းနည်းကြီးပုံရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုထိန်းရ မယ် အခြားသူကို ဘယ်လိုဆန်းစစ်ရမယ်ဆိုတာ အထာနပ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့။ ဘယ်ဘက်မျက်ခုံးမှာ ငွေကွင်းလေးတစ်ခု ဖောက်ဆွဲထား တာကိုလည်း မြင်လိုက်ရတယ်။
သူ ကျနော့်မျက်နှာကို မျက်ခွံလှန်ပင့်ကြည့်ရင်း “မင်း ဘာလိုချင်လို့ လာတာလဲ” တဲ့ ခပ်တိုးတိုးမေးတယ်ဗျ။
ကျနော့်အထင် ပေါင်ကြား ကျနော့်ညီဘွားက သိပ်မမာတဲ့အခြေအနေကို သူမြင်သွားပြီး စိတ်ဝင်စားသတိထားမိတယ် ထင်ပါရဲ့။
တကယ်တမ်းတော့ ကျနော်ဘာမှထူးပြီး မမျှော်လင့်မိပေမဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်မိပါတယ်။ ရူးတယ်လို့ဆိုမလား ရုပ်ရည်ကြည့်ကောင်းတဲ့ ဘဲကြီးတွေပြောတဲ့စကားဆို သိပ်ပြီးအထူးတလည် ကန့်လန့်မတိုက်မိတတ်ဘူးလေ။
ပြီးတော့ ဒီငနဲကိုကြည့်ရတာ အမာစားဆိုပေမဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဗျ။
နံဘေးအခန်းက ကျော်ကြည့်နေရာက စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ပျောက်သွားပြီးနောက် ကျနော်တက်နေတဲ့အခန်းတံခါးကို ဖိတွန်းပြီး ၀င်လာပါတယ်။
ကျနော်လည်း တံခါးရွက်တွန်းထားတာကိုလျော့ပြီး သူဝင်လာတာကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဘောင်းဘီထဲပြန်မထည့်ဖြစ်သေးတဲ့ ကျနော့်ငပဲက မမာတောင့်သေးဘဲ ဒီအတိုင်းရှိသေးတော့ ကြည့်ရတာ အမြင်မဆန်းသေးဘူးဆိုရ မယ်။
သူအခန်းထဲဝင်လာပြီး သူ့နောက်က တံခါးကိုပြန်ဖိတွန်းက လော့ခ်ျလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တံခါးလော့ခ်ျပျက်နေတာကြောင့် အဆင်မပြေဘူးလေ။
သူ အရပ် ၆ပေ ၂လက်မ သို့မဟုတ် ၃လက်မလောက်တော့မြင့်မယ်ဗျ နည်းနည်းတော့ပိန်တယ်။ အနက်ရောင် ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ အနက်ရောင် တီရှပ်ကို သူတွဲဝတ်ထားတာပါ။ သူ့ညာဘက်လက်မောင်းရဲ့ ဖောင်းကြွနေတဲ့ biceps ပေါ်ဝယ် နဂါးတစ်ကောင်ပုံဟန် အရောင်မှိန်တက်တူးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။
သူက ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပါပဲ “ငါ -ိုးရတာကြိုက်တယ်၊ မင်း -ိုးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ငါ့ကို-ိုးပေါ့ကွာ၊ ဒါပေမဲ့ ငါလည်း မင်းကို -ိုးမှာနော်” လို့ပြောပါတယ်။
ကျောပေါ်တင်ထားတဲ့ ကျနော့်လွယ်အိပ် ကြမ်းပြင်ကိုလျောကျရပြီပေါ့။
သူ အဲ့ဒီစကားကို မပြောခင်အထိ နှိုးဆွတဲ့ခံစားမှုမျိုး ခပ်ရေးရေးတောင် မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ သူ့အပေါ်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဆောင်မှုရှိခြင်း ကြောင့်ဆိုတာထက် ဘာကြောင့်လည်းတော့မသိဘူး လွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုရှိလာသလို ခံစားရတယ်။
ဒါပေမဲ့ မကြာခင်မှာပဲ အကြောင်းရင်းကို ဆန်းစစ်မိရပါတယ်။ ကျနော့်လို ဖြူနုနုအသွင်အပြင်နဲ့ကွဲပြားစွာ သန်မာတောင့်တင်းတဲ့ဟန်ရှိ သလို ယောက်ျားဆန်တဲ့သွင်ပြင်ကြောင့် စမ်းသပ်လိုစိတ်ကဲကာ လိင်ဆက်ဆံဖို့နှိုးဆွခြင်းကို ငံ့လင့်မိတာပါ။
သူ့ဘောင်းဘီက ခါးပတ်ကို သူစချွတ်တယ်။
ကျနော်က “ခင်ဗျား နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ?” မေးလိုက်တော့ သူက မကြေမလည်အကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်ကာ “ဘာလို့လဲ” တဲ့။
“အိမ်သာထဲမှာ လိင်ဆက်ဆံ(-ိုး)ကြတာပဲကွာ၊ မင်း ဘာကြောင့်ငါ့နာမည်သိဖို့လိုမလဲ”
ကျနော် ပခုံးတစ်ချက်တွန့်လိုက်မိရင်း "Okay... forget it." လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်တော့ ကျနော့်ကို သူ ခပ်စိမ်းစိမ်းစိုက်ကြည့်နေသေးတယ်ဗျ။ ပြီးမှ ဘောင်းဘီဇစ်ပေါ်တင်ထားတဲ့ ကျနော့်လက် အစုံကိုစူးစမ်းရင်း သူ့ဘောင်းဘီခါးပတ်ကို ဆက်ချွတ်တယ်။
၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီက ဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်ရင်း ‘ကျနော် အရင်-ိုးမှာနော်’ လို့ပြောလိုက်တယ်။
ကျနော်ပြောတဲ့စကားကို အမှုမထားဟန် ခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ့်ကာ ‘ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကွာ’ လို့ သူပြန်ပြောတယ်ဗျ။
သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ကျနော့်နားတိုးကပ်လာတာက ကျနော့်စိတ်ကို တကယ်ထန်လာစေပါတယ်။ သူ ကျနော့်ကို -ိုးချင်တယ်လို့ပြောခဲ့သလို ကျနော့်တောင်းဆိုမှုကြောင့်လဲ တုန့်ဆိုင်းမှုမရှိအလွယ်တကူပဲ လိုက်လျောတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ။
ကျနော့်ငပဲခေါင်းထောင်ထလာပါပြီ မကြာခင် အစွမ်းကုန်မာတောင့်တော့မယ်လေ။
၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို အောက်ကိုဆွဲချ အထဲကအတွင်းခံဘောင်းဘီအဖြူရောင်ကိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းဆွဲချွတ်ပေါ့ ကျနော်လုပ်လိုက်တာ။
“ခင်ဗျား….ကီးပေးမှာလား …တခြားဟာကော” လို့ ကျနော်မေးလိုက်တယ်။
သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ရုတ်ကနဲဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး သကာလ အဖြေစကားပြောတယ် “No” တဲ့။
ကျနော် အနည်းငယ်ရှေ့တိုးလိုက်ရင်း “ခင်ဗျားက ဂေးလားဗျ?” လို့ထပ်မေးလိုက်သေးတယ်။
သူ ကျနော့်ကို မျက်ခွံလှန်ကြည့်တယ် မယုံသင်္ကာအကြည့်တွေနဲ့ပေါ့။ သူ့ဆံပင်တွေက ကော်ဖီစေ့လိုပဲ အညိုရောင်ရင့်ရင့်တွေ။ ခဏနေ တော့ အေးစက်စက်လေသံနဲ့ “မင်း ငါနဲ့ လုပ်ချင်တာလား မလုပ်ချင်ဘူးလား ဒါမှမဟုတ် ဒီေ-ာက်စကားတွေပဲ တနေကုန်ပြောနေတော့ မှာလား?” ပြန်ပြောတယ်လေ။
ကျနော့်ငပဲဟာ မာတောင့်လို့ အပေါ်ကိုကော့ညွှတ်လာတာ ချက်တောင်ထိတော့မယ်။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အမွှေးအမျှင်ကင်းသော သိပ် မတုတ်ခိုင်လှသည့် သူ့ပေါင်တံနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ ငပဲကတော့ မမာ့တမာအခြေအနေရှိသေးတာကို ကျနော်သတိထားမိပါတယ်။ ငပဲ ထိပ်ခေါင်းက ပန်းသွေးရောင်နီရဲနေသလို သူ့ကပ္ပာယ်အိတ်ကလည်း ခဲထည့်ဆွဲထားသလားပဲ တွဲကျနေတယ်လေ။
ကျနော် ဦးခေါင်းကို ခပ်သွက်သွက်ငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း “အာ….ကျနော်…ကျနော် လုပ်မှာပါဗျ” လို့ပြန်ဖြေလိုက်မိတယ်။
သူ ခေါင်းကိုဆတ်ကနဲငြိမ့်အသိအမှတ်ပြုရင်း ဘေးတစ်ဘက် ကျနော့်ကိုတိုးကပ်စေရန် တွန်းထိုးလိုက်ကာ အုတ်နံရံကိုလက်ထောက်ရင်း ခါးကုန်းချလိုက်တယ် အသင့်အနေအထားပေါ့။ ဘဲကြီးက အသားဖြူတော့ တင်ပါးတွေကဖွေးနေသလို တင်သားအကွဲကြောင်းထဲကပြူ နေသော ခရေ၀လေးကလည်း တမျိုးလေးစူနေတယ် အမွှေးခပ်ထူထူ ၀န်းရံလို့ပေါ့။
သူက “အိုကေ…. မင်း -ီးကို ကွန်ဒုံးစွပ်လိုက်ဦး…ပြီးတော့ အချိန်သိပ်မစွဲနဲ့လုပ်တာ” တဲ့။
ကျနော် ချွတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီအိပ်ကပ်ထဲက ပိုက်ဆံအိပ်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ အမြဲလိုလို ပိုက်ဆံအိပ်ထဲမှာ ကွန်ဒုံးနှစ်ခုလောက် တော့ ဆောင်ထားတတ်တာကိုး။ တစ်ခုကိုဖြုတ်ယူ ပိုက်ဆံအိပ်ကို ဂျင်းဘောင်းဘီအိပ်ကပ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်။
ကျနော် ကွန်ဒုံးယူပြီး ခေါင်းပြန်မော့လိုက်တော့ ဘေးအခန်းနဲ့ကာထားတဲ့ ခပ်နိမ့်နိမ့်အကာအရံအပေါ်ဘက် နေရာလွတ်ကနေ ကြည့်နေတဲ့ သက်လတ်ပိုင်းရွယ် လူတစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။
နံရံကိုလက်ထောက်ကာ ခပ်ကုန်းကုန်းလုပ်နေတဲ့ငနဲက “လာစမ်းပါကွာ….ငါ အခြားနေရာကိုသွားရဦးမှာ၊ ပြီးတော့ မင်းကိုလည်း ပြန်လုပ်ချင်သေးတယ်ကွ” လို့ အလောသုံးဆယ်လှုံ့ဆော်ခေါ်ငှင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကွန်ဒုံးအိပ်ကလေးကိုအမြန်ဖောက် မတ်ထောင်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲမှာစွပ်လိုက်ရင်း ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်းနေတဲ့ တင်သားဆိုင် နှစ်ခုကြားထဲ အရှေ့တိုးဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်။
“အောက်ကိုနည်းနည်းနှိမ့်” သူ့အသံက လတ်တလောလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေတာလည်းမဟုတ် တက်မက်တွယ်ငြိသံ လည်းမပေါ် အမိန်းပေးတဲ့လေသံပါပဲ။
ကိုယ့်ငပဲကို အသာလေးပြန်ဆွဲကိုင်လိုက်ရင်း တင်ကွဲကြောင်းအတွင်းဘက် အောက်ဖက်ခပ်ကျကျစီ အသာအယာထပ်မံဖိသွင်း လိုက်ပါတယ်။ ခရေ၀ထဲ ကျနော့်ငပဲဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ချိန်မှာတော့ အမွှေးအမျှင်အချို့ရဲ့ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် လေတိုးသံလိုလိုထွက် ပြုလာသေးတယ်။ လိင်တံတစ်ဝက်လောက်သွင်းအပြီးမှာတော့ နုညံ့ပြီး အဖုတစ်ခုခုလိုနေရာတစ်ခုကို ထောက်ပြုမိတာ ခံစားရပါရဲ့။
သူ့ပါးစပ်က ညည်းတွားသံအနည်းငယ်ထွက်လာရင်း “အား….အဲ့တာပဲ…ထိတယ်” တဲ့။ ပြီးတော့ “ ခပ်မြန်မြန်မဆောင့်နဲ့ကွ တစ်ချက်ခြင်း ထိအောင်လုပ်” လို့ပြောသေးတယ် ။
ကျနော် သူ့ခရေ၀ထဲ တကယ့်ကို အသာနှေးနှေးဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာတုန်းက အခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ ကလပ်တက်လို့ ကြုံဖူးခဲ့တဲ့ anal sex ကဘယ်လိုနာတယ်ဆိုတာသိတော့ ကိုယ်ချင်းစာလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ သူက “လုပ်စမ်းပါကွာ…အကုန်ဝင်အောင်သွင်း….ငါ အခြားနေရာသွားဦးမလို့..” တဲ့အလောသုံးဆယ်ပြောတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျနော်လဲ ခရေ၀ထဲမြုပ်သွားအောင် လျောကနဲ ဖိတွန်းပစ်လိုက်တယ်။ နုညံ့ပြီး ပူနွေးနေတဲ့အရသာက လိင်တံတလျောက် လှိုက် တက်လာတာကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
သူ့ပါးစပ်က ပင့်သက်ရှိုက်သံထွက်လာခြင်းနဲ့အတူ ခေါင်းကို တဆတ်ဆတ်ငြိမ့်လိုက်ရင်း “အား…အဲဒါပဲ…..အာ…-ိုးကွာ….ချ… ဒါပေမဲ့ … သိပ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်” တဲ့ထပ်ပြောတယ်။
နောက်တော့ သူ့ကိုကျနော် အရှိန်မှန်မှန်နဲ့ စ-ိုးတာပေါ့နော် ငပဲကြီး ခပ်ဖွေးဖွေးတင်သားဆိုင်အကွဲကြောင်းကြားထဲက ခရေ၀ထဲ အ၀င်အထွက်ဖြစ်နေတာကိုငေးရင်းပေါ့။ တစ်ချက်ပြန်စွဲအထုတ်မှာတော့ ကွန်ဒုံးပေါ်ဝယ် စေးထန်းသော အရည်တစ်ချို့ ပေကျံနေတာကို တွေ့ရသေးတယ်။
ဘေးအကာနံရံပေါ်ကနေ ကျော်ကြည့်နေတဲ့ဘဲကြီးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်လုပ်နေတဲ့အခန်းထဲအခုပဲဝင်လာပြီး အတူနွှဲ တော့မယ့်အတိုင်း ငေးနေရော။ ပြီးတော့ သူ့ပခုံးက လှုပ်ပြီးတုန်နေတာဆိုတော့ သူ့ဖာသာလက်ကစားနေပြီထင်ပါတယ်။
ကျနော့်ရှေ့ကကုန်းနေတဲ့ငနဲက “မင်း-ိုးပြီးရင်း ငါပြန်-ိုးမှာနော် မင်းကို….ဘယ်လိုမှ မင်းငြင်းလို့မရဘူး၊ အိုကေ?” လို့ တရှီးရှီး ပါးစပ်က အသံထွက်ရင်း ချုပ်နေသေးတယ်။
ကျနော်ကတော့ သူ့ခရေ၀ထဲ ငပဲကိုလျောကနဲ လျောကနဲ အချိန်ကိုက်သွင်းတာ ကြာလာတော့ စည်းချက်ကိုကျနေရောဗျာ။
အရင်အတွေ့အကြုံများအရ သူအလိမ်ခံရဘူးတဲ့သဘောထင်ပါရဲ့။ သူ့ကို-ိုးတဲ့ ငနဲတွေက -ိုးပြီး သူ့ကိုပြစ်ထားခဲ့ပုံပါပဲ။ သူ့ခြေချင်းဝတ် မှာ ပုံကျနေတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီက တုန့်နေတော့ ပက်လက်လှန်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ငပဲပေါ်ကို တက်ထိုင်ပြီးခုန်ဆွ ခုန်ဆွလုပ်နေတဲ့ အတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။
ကျနော် သူ့အတွက် သနားစိတ်ဝင်မိသလိုခံစားရတယ်။ ဒီတော့ သူ့စိတ်ကိုနှစ်သိမ့်စေသောငှာ ‘အာ…အ-ိုးခံရတာ ကျနော်လည်းကြိုက်ပါ တယ်ဗျ…လုပ်တာကျွမ်းတဲ့သူနဲ့ဆို အရမ်းကောင်းမယ်’ လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူ့ပခုံးပေါ်ကိုကျော်ပြီး ကျနော့်ကိုနောက်ပြန်စောင်းငဲ့ကြည့်ချိန်မှာတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အနည်းငယ်တုန်ခါနေသလို ကျနော့်ငပဲကြီး ဟာလည်း သူ့ခရေ၀ထဲ နင့်ကနဲ နင့်ကနဲ ၀င်ထွက်နေပါတယ်။
သူ ကျနော့်စကားကိုကြားပြီးနောက် “အာ့ဆို မြန်မြန်လုပ်လေ…ပြီးရင် ငါလည်းမင်းကို ကောင်းကောင်းလေး-ိုးချင်နေပြီကွ” လို့ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပြုံးရင်းပြောပါတယ်။
ဘာလည်းတော့မသိ ကျနော့်စိတ်တွေ အနည်းငယ်ညစ်ညူးသွားသလိုပါပဲ။ သူပြုံးတဲ့အတိုင်း ပြန်ပြုံးပြဖို့ ခဲယဉ်းနေတယ်။ အခြားအခန်းက နေ ကျော်ကြည့်နေတဲ့ ဘဲကြီးက ခပ်တိုးတိုးအသံနဲ့ “လုပ်ဟ ကောင်လေးရ…မင်းစိတ်ကြိုက်ဆောင့်-ိုးစမ်းပါကွာ…” လို့ အားပေးတယ်။
ကို့ရို့ကားယားနိုင်သော အခြေအနေများ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခန်းလုံးလိုလိုလွှမ်းနေတဲ့ အခြားငနဲတွေပေါက်ထားသော ဆီးနံ့တွေကြောင့် လားမသိ စိတ်က ခုလုခုလုဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် သိပ်မကြမ်းချင်စိတ်ဖြစ်ရုံလေးပါပဲလေ။
သူ့ခရေကြွက်သားတွေက ကျနော့်ငပဲကိုညှစ်ညှစ်ပေးနေတာဆိုတော့ အတွင်းထဲသွင်းထားတဲ့ ငပဲက သံချောင်းအလားမာထန်နေပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီငနဲကို စိတ်အားထက်ထက်သန်သန်နဲ့ အရှိန်မြှင့်-ိုးချင်စိတ်ကို တိုးလာအောင်မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ကျနော် ငပဲကိုအပြင်ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တယ် လေလည်သံလိုနဲ့ အသံတစ်ချက်တော့ထွက်တာပေါ့လေ။
Yeah, အရှိန်ခပ်မြင့်မြင့်မမြှင့်ဘဲ…. အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်သံတွေ မပြင်းထန်မလှုပ်ရှားဘဲ သုက်ရည်တွေ တဗြန်းဗြန်းထုတ်တတ် ပါတယ်။
ကျနော် ခေါင်းကိုငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း “အာ…ကျနော်အ-ိုးခံချင်ပြီဗျ” ပြောလိုက်တယ်။
ကြွေကမုတ်အပေါ်က နံရံမှာလက်ထောက်ကုန်းနေတဲ့ ငနဲကြီး ခါးကိုမတ် ကျနော့်ဘက်ကိုလှည့်လာပါပြီ။
နောက်တော့ အိမ်သာစက္ကူလိပ်က စက္ကူအနည်းငယ်ကိုဖြဲစုတ်ပြီး သူ့ဖင်ကြားထဲသုတ်သင်လိုက်တယ်။ လေအံသံ ခပ်တိုးတိုးတော့ ထွက်လာလေရဲ့။
မျက်နှာက ခပ်မာမာမဟုတ်တော့ဘဲ အပြုံးတစ်ချက်ဆင်ရင်း “ မင်းလို သဘောကောင်းတဲ့ ကောင်လေးကို ငါ သဘောကျသွားပြီကွာ” လို့ပြောပါတယ်။
အတောင်မကျသေးတဲ့ ကျနော့်ငပဲက ကွန်ဒုံးကိုဆွဲချွတ်ပြီး အမှိုက်ခြင်းလေးထဲကို ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ ခရေထဲက သဘာဝအလျောက် အရေကြည်မထွက်ဘူးဆိုပေမဲ့ အခြားအရည်ညစ်တွေထွက်တော့ ပေကျံနေမှာ အနံ့ထွက်နေမှာလေဗျာ။
အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်က စက္ကူအနည်းငယ်ကို ယူလိုက်ပြီး ငပဲကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းလိုက်ပါသေးတယ်။ ခဏမဆိုင်း သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီ နောက်အိတ်ထဲကနေ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ဒုံးတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာ မြင်လိုက်ရပါရဲ့။
သူက “မင်းဖင်ထဲကို ငါ့-ီးဝင်အောင် အပေါ်ကနေတက်ထိုင်ပြီးသွင်းပါလား၊ အဲ့အနေအထားက ပိုအဆင်ပြေမယ်ကွ” လို့တောင်းဆိုပါ တယ်။ မဆိုးဘူး အပေါ်ကတက်ဆောင့်ရတော့ ကိုယ့်အရှိန်ကိုထိန်းလို့ရသလို အနာသက်သာတာပေါ့။
ကွန်ဒုံးသုံးလေးခုပါလာတဲ့အထဲက တစ်ခုကိုယူလိုက်ကာ ကျန်တာတွေကို သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီနောက်ဘက်အိတ်ကပ်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက် ပါတယ်။
“ငါ လှဲနေတဲ့အနေအထားနဲ့ အဆင်ပြေအောင်လှုပ်ရှားနော် ကောင်လေး” လို့သူက သတိပေးသေးတယ်။
ကျနော် ခေါင်းငြိမ့်ပြရပြန်ပြီ။ အိုကေ…ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ကျနော့်ဘာသာကြိုးစားခွင့်ပေးပါပေါ့။
ကွန်ဒုံးအိတ်ကလေးကို အသာဖောက်ပြီး ကွန်ဒုံးကို သူ့ငပဲကြီးပေါ်အသာအယာအကျွမ်းတ၀င်စွပ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ငပဲက ၆လက်မ ဒါမှမဟုတ် ၇လက်မလောက်တော့ရှည်မယ်ဗျ။ အတုတ်ကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ ကျနော်က လိင်တံဆိုဒ်စုံနည်းနည်းလောက် ထိတွေ့မြင်ကြည့် ပြီးပြီဆိုတော့ သူ့ဟာကြောင့်ပြဿနာတစ်စုံတရာမဖြစ်လောက်ပါဘူး။
သူ့ငပဲကို ကွန်ဒုံးစွပ်ပြီး တစ်ချက်နှစ်ချက်တော့ လက်ကစား(-ွင်း)လိုက်သေးတယ်ဗျ။ ငပဲတောင့်တောင့်တင်းတင်းဖြစ်တာသေချာပြီ ဆိုမှ အိမ်သာကြွေကမုတ်ကိုအဖုံးပိတ်ပြီး ထိုင်ချနောက်မှီလိုက်တယ်လေ။
ကျနော်တို့ကို ကြည့်နေတဲ့ဘဲကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေလည်း သိချင်တာနဲ့ တစ်ချက်မျက်ခွံပင့်ကြည့်လိုက်တာ သူမဟုတ်ဘဲ အားကစားဝတ်စုံနဲ့ ငနဲလေးရဲ့မျက်နှာဖြစ်နေတာကြောင့် ကျနော့်မှာမျက်လုံးပြူးချင်ချင်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဒီငနဲလေးကြည့်တဲ့အလှည့်ပေါ့လေ။
ကျနော့်ရှေ့က အိမ်သာကြွေကမုတ်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ငနဲကို ပြန်ကြည့်မိတော့ သူ့ငပဲကို မတ်ထောင်နေအောင်ထိမ်းကိုင်ထားရင်း နောက်ကို နည်းနည်းမှီထိုင်နေတယ်။ တက်ခွပြီးထိုင်ဖို့အသင့်ပါပေါ့လေ။
သူက “ဒါကြီးကို မင်း-င်ထဲ တကယ်သွင်းချင်နေပြီကွာ” လို့ မြူဆွယ်သံနဲ့ပြောပါတယ်။
ပါးစပ်ကနေ အိုကေလို့ ကျနော်ပြန်ပြောလိုက်ပေမယ့် ဒီလိုအနေအထားနဲ့လုပ်ဖို့ကိုတော့ လက်တွေ့များများမလေ့လာခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူက ပုံမှန် anal sex လုပ်သလိုလုပ်မယ်မပြောဘဲ လက်နဲ့ကစားသလို ခရေကိုသုံးပြီး လိင်အာသာဖြေကြမယ်လို့ပြောတာကိုး။ ဘာများကွာခြား ပါလိမ့်နော်။
ကျနော် တံခါးဘက်ကိုမျက်နှာမူကာ သူ့ဘက်ကိုဖင်ပေးထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒူးအထိလျောချထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ခြေဖမိုးထိလျော ချရင်း လှုပ်ရှားရအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားရတာပေါ့။
နောက်တော့ ကျနော့်တင်ပါးကို သူ့ငပဲရှိရာ အသာနှိမ့်ချလိုက်တော့ အေးစက်စက် ရာဘာစွပ်ထားတဲ့ ငပဲခေါင်းက ခရေ၀ထဲတိုးဝင်လာ ပါတယ်။
စ၀င်ကာစတော့ဘာမှမခံစားရပေမယ့် တဖြေးဖြေးဝင်လာချိန်မှာတော့ နာကျင်မှုကြောင့် ပူကနဲဖြစ်သွားသလို ခံစားရတယ်။
ကျနော် နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး ခုန်ထလိုက်မိရော။
သူ့ပါးစပ်က “ဟေး..” လို့အထိတ်တလန့်ခေါ်သံထွက်လာတယ်။ ကျနော်က အခုပဲထပြေးတော့မယ့်ပုံစံပေါ်သွားတာကိုး။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်သူ့ဘက်ပြန်လှည့်လိုက်ရင်း “ခင်ဗျား….blow jobs လုပ်ပေးတာလေးနဲ့ သဘောမကျဘူးဆိုတာသိပါတယ်…ဒါပေမဲ့…အ”
ကျနော် ဒူးကားထိုင်နေတဲ့ သူ့ရှေ့ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ ငပဲကြီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။
အရသာက တော်တော်ရွံဖို့ကောင်းသား…ရာဘာနဲ့အတူ ခပ်ခါးခါးအရသာကို သူ့ကွန်ဒုံး၊ ဓာတုမကင်းတဲ့ ချောဆီတွေကနေ ရလိုက် တယ်။
သူ့ငပဲကြီးကို စိုစွတ်နိုင်သမျှစိုအောင် တံတွေးတွေရွှဲအောင် အစိုဓာတ်ပေးနိုင်သမျှစိုအောင် ကျနော်ကြိုးစားလုပ်ပေးမိပါတယ်။
နောက်တော့ သူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်ရင်း ပြုံးဖြဲဖြဲရယ်ပြလိုက်ကာ “ဆောရီးဗျာ…ကွန်ဒုံးစွပ်ထားပေမဲ့ နည်းနည်းခြောက်နေတော့ သွင်းရတာ နာတယ်ဗျ”
သူကလည်း ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ “မင်း ခရေကလည်းကွာ ငါ့ဟာလို အေးဆေးမဟုတ်ဘူးဘဲ။ ငါ့ငပဲက မာနေပြီ…ဒါတောင်ပျော့မနေဘူးကွ” လို့ပြန်ပြောပါတယ်။
သူ့ရဲ့အေးစက်မှုနောက်မှာ နွေးထွေးမှုနဲ့အတူ ဟာသဥာဏ်လည်းရှိသားပဲဗျ။ သူ့အသွင်အပြင်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာ ချစ်စဖွယ်ပုံဟန် တစ်ခုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။
တံခါးဘက်ကိုမျက်နှာပြန်မူ သူ့ဘက်ကျောပေးရင်း တင်ပါးကိုနှိမ့်ချကာ ခရေ၀နဲ့ သူ့ငပဲစီပြန်တေ့ထိုင်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော့်ရွှေဥနဲ့ ဆီးအိတ်ကြားနေရာလေးက တစ်မျိုးတစ်မည်ခံစားရပါတယ်…သူ့ငပဲကြီး တငြိမ့်ငြိမ့်ဝင်ချိန်မှာပေါ့။
သူ့ငပဲကြီး ကျနော့်ခရေ၀ထဲ တစ်လက်မ ဒါမှမဟုတ် ဒီ့ထက်ပိုချင်လည်းပိုမယ် ၀င်သွားချိန်မှာတော့ ငနဲကြီးပါးစပ်က ပင့်သက်ရှိုက်သံတွေ ထွက်လာပါတယ်။
အိမ်သာအခန်းဘေးအကာရဲ့ အပေါ်ဘက်နေရာလွတ်ကနေကြည့်နေတဲ့ ငနဲလေးက “လုပ်စမ်းပါဗျာ…ခပ်ဖြည်းဖြည်းထိုင်မနေစမ်းပါနဲ့ မြင်းစီးသလို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဖိထိုင်ပစ်” လို့ပြောတယ်။
ကျနော့်ခရေ၀ထဲ ငနဲကြီးရဲ့ပစ္စည်း ပိုပိုဝင်သွားအောင်ကြိုးစားမိတော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ၀က်မြည်သံလိုအော်ညည်းသံထွက်လာတယ်။ နောက်တော့ ကျနော့်တင်ပါးဆုံကို သူ့လက်နဲ့ဆွဲကိုင်ဖိချလိုက်တာကြောင့် တင်သားဆိုင်တွေဟာ သူ့ပေါင်အပေါ်ပိုင်းတွေနဲ့ ထပ်လျက် သားဖိကပ်သွားပါတယ်။
သူ့ငပဲကြီး တစ်ခုလုံး ကျနော့်ခရေ၀ထဲရောက်နေပါပြီ။
"ဒါပဲလေ ဘော်ဒါရ…အခု အသာလေး ခပ်ဖြေးဖြေးလှုပ်ရှားပေးတော့ကွာ”
ကျနော် ထိုင်ထဝေ့၀ိုက် စလုပ်ပေးဖြစ်တော့ သူ့ငပဲကြီး အ၀င်အထွက် စည်းချက်ညီနေသလို ငနဲကြီး နှုတ်ဖျားကနေ “အဲဒါပဲ…အဲဒါပဲ.. မိုက်တယ်” လို့ ညည်းတွားရေရွတ်သံထွက်လာတယ်ပေါ့။
ဒါဖြင့် ဒီလိုလုပ်ပေးနေတာက သူပြောတဲ့ လိင်အာသာဖြေနည်းတစ်ခုများလား။
ကျနော့်ကိုယ်ပိုင် ငပဲကတော့ နည်းနည်းပျော့ပြောင်းနေပြီး ထိုင်ထခုန်ဆွလိုက်တိုင်း ကားမှန်ကို wiper သုပ်သလိုထက်အောက်လှုပ်ရှား နေပါတော့တယ်။ ညီဘွားက တုတ်ဆဲဖြောင့်ဆဲ ဆိုပေမဲ့ အပေါ်ကိုတော့ မတ်ထောင်ဖို့အားလိုနေတဲ့ပုံလေ။
ကျနော့်ခရေ၀ထဲ ငနဲရဲ့ ညီဘွားကြီး တဖြည်းဖြည်းအ၀င်အထွက်မှန်အောင် စလုပ်မိတာနဲ့တပြိုင်နက် နံဘေးက အကာပေါ်ကကျော်ကြည့် နေတဲ့လူဟာ သူကြည့်နေတဲ့အခန်းထဲကနေအပြင်ထွက် အပြင်ကလူတွေကို တစ်စုံတစ်ခုပြောလိုက်တယ်ဗျ။
နောက်တော့ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံပြည့်ဝတ်ထားတဲ့လူ အဲ အရင်ဆုံး ဘေးအကာကနေချောင်းကြည့်ဖူးတဲ့လူက ကျနော်တို့ရှိနေတဲ့ အိမ်သားအခန်းငယ်ရဲ့ တံခါးကိုတွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လာတယ်။
အိုးမိုင်ဂေါ့ဒ်…..အမြင်မတင့်တယ်တဲ့ အနေအထားကြီးဆိုတော့ တံခါးကိုဖိတွန်းပြီး ပိတ်ဖို့ ကျနော်ကြိုးစားပါတယ်။
သူက… “အေးဆေးပါ ဘော်ဒါရာ….ငါတို့အားလုံးက အဆင်ချောပါတယ်ဟ..” တဲ့ လေးလေးနက်နက် သေချာဂရုစိုက်သော အသံနဲ့ပြော ပါတယ်။
အထိုင်အထ အဖိအကြွ ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ ပါးစပ်ကတော့ “အာ….တံခါးကို ပိတ်လိုက်စမ်းပါဗျာ…” လို့ပြောမိတယ်။
သူက တံခါးကိုအကုန်တော့မဖွင့် အနည်းငယ် ခပ်ဟဟထားရင်း နှစ်လိုလက်ရပြုံးကာ “လုပ်စမ်းပါ ဘော်ဒါရာ…လုံခြုံပါတယ်ဟ..ငါတို့က မင်းကိုစောင့်ကြည့်ရုံပါကွာ” တဲ့လေ။
အရပ်ရှည်ရှည် အနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့လူက ကျနော်တို့အိမ်သာအခန်းလေးရဲ့ရှေ့အပြင်မှာရပ်ရင်း ဟနေသော တံခါးရွက်ကတဆင့်ကြည့် နေတာကို ကျနော်မြင်လိုက်တယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားက… “အိုး…အမိုက်စားပဲ” တဲ့ဗျာ။
ကျနော်ကျောပေးထားတဲ့ အိမ်သာကြွေကမုတ်ခုံပေါ် မှီထိုင်ပြီး ငပဲအငှားပေးထားသော ငနဲက “သူတို့ကြည့်ချင်ကြည့်စမ်းပါစေကွာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး” လို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် ၀တ်စုံပြည့်နဲ့လူက “ငါတို့ထဲက တစ်ယောက် အိမ်သာခန်းကြီးရဲ့ တံခါးဝမှာစောင့်နေမှာပါ အပြင်က တစ်ယောက် ယောက်လာမလာသိရအောင်။ မင်းအတွက် ဘာမှပြဿနာမရှိစေရဘူး။” လို့အားပေးပါရဲ့။
အဲ့ဒီလူကို ကျနော်တို့အခန်းငယ်လေးရဲ့တံခါးကိုအပြည့်ဖွင့်ဖို့ ခွင့်ပြုပေးလိုက်တော့ အခြားငနဲတစ်ပွေကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ကျနော် ဒီအထဲဝင်လာစဉ်က မြင်လိုက်ရသော အသက်အငယ်ဆုံးနဲ့ ဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားသောငနဲလေးပေါ့။ နောက်ကိုခြေလှမ်းအနည်းငယ် ဆုတ်ထားရင်း အိမ်သာတံခါးရွက်ကို သူ့လက်နဲ့ဖိပိတ်ထားတာလေ။ သူက ကျနော့်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ အဆင်ပြေ ကြောင်းအချက်ပြပါတယ်။
ကျနော် ခပ်သွက်သွက်လေး အထိုင်အထ အဖိအဖော့ဆက်လုပ်စဉ်မှာတော့ အခြားသော လေးယောက် သို့မဟုတ် ငါးယောက်လောက် သော အုပ်စုဟာ ကျနော်တို့ အိမ်သာအခန်းငယ်လေးရဲ့ရှေ့မှာ ရပ်ရင်း ကြည့်နေကြတယ်လေ။
အထိုင်အထလုပ်တိုင်း ကျနော့်ပေါင်ကြားမှာ ခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့လွှဲခတ်နေသော ငပဲကိုရော ကျနော့်ခရေ၀ထဲတိုးဝင် တိုးထွက်ဖြစ်နေသော ကွန်ဒုံးစွပ်ထားတဲ့ ငပဲကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုရော သူတို့မျက်လုံးတွေက တည့်တည့်ကြီးကိုကြည့်နေကြတာပါ။
ငနဲတစ်ပွေက အနည်းငယ်ရယ်မောလိုက်ရင်း “အမိုက်စားပဲ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ထပ်ပြောပြန်တယ်။
သူ ကျနော့်မျက်နှာရဲ့ဖြစ်ပျက်နေမှုကို ကြည့်ပြီး နောက်တစ်ခါရယ်ပြန်တယ်။ သူ့ကိုပြန်ပြုံးပြဖို့ ကျနော်မတတ်နိုင်ဘူးလေ မျက်နှာက ထိန်းမရဘူး။ ကျနော့်ငပဲရဲ့ဖြစ်ပျက်နေပုံတွေရော အောက်ကလူရဲ့ အ-ိုးခံနေရတာကိုရော သူတို့အုပ်စုကို ရှိုးပွဲပြနေသလိုဖြစ်နေတာ အမှန်ပါပဲ။
ကျနော့်နောက်ကလူက ကျနော့်ခါးအစုံကို အသာခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး သူ့ငပဲအထဲပိုပိုရောက်အောင်ကြိုးစား လာပါတယ်။ ပြီးတော့ “ဘော်ဒါ…အဲ့သလို…အာ….နည်းနည်းလေး ပိုမြန်ပေးကွာ” လို့ ညည်းတွားပြောဆိုတာပါ။
အားကစား tracksuit ၀တ်ထားတဲ့ငနဲက သူ့ဘောင်းဘီရှေ့ပိုင်းကြယ်သီးကိုဖြုတ်ရင်း ငပဲကိုအပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်တာ ကျနော်မြင်မိရ တယ်။ ကျနော်တို့လှုပ်ရှားနေတာကို စောင့်ကြည့်ရင်း လက်ကစား(-ွင်းထု)သည်ပေါ့။
အခြားသောသူတွေကလည်း tracksuit ငနဲ ဦးဆောင်မှုနောက် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်လိုက်ပါလာပါတယ်။
သူတို့ငပဲတွေဟာ ဆိုဒ်စုံ ပုံစံအစုံပါပဲ။ tracksuit နဲ့ငနဲဟာက တိုပြီးတုတ်တယ်၊ သက်လတ်ပိုင်းလူကြီးငပဲက ဘယ်ဘက်ကိုကွေး နေရော၊ အရပ်ရှည်ရှည်ငနဲကြီးဟာကျတော့ မြင်း-ီးကြီးကျနေတာပဲဗျာ။
ဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားတဲ့ အပြင်ကိုထွက်တဲ့တံခါးဝနားက စောင့်နေတဲ့ငနဲလေး “ဟေး လူတွေ…တစ်ယောက်ယောက်လောက်တော့ လာစောင့်ပေးဦးလေ ကျုပ်လည်းကြည့်ချင်တယ်” လို့ စောင့်ကြည့်တာဝန်ပြောင်းဖို့အော်ပြောပါတယ်။ သူလာတဲ့လမ်းမှာကွယ်နေတဲ့ ငနဲတွေကို အနည်းငယ်တွန်းရင်း ကျနော်တို့အခန်းငယ်နားလျှောက်လာတယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီအနက်နဲ့ငနဲရဲ့ -ီးကိုမြင်းဆက်စီးနေရင်း “တစ်ယောက်ယောက်လောက် တံခါးမနားသွားရပ်နေဦးလေဗျာ” လို့ ကျနော်ပြော လိုက်တယ်။
တစ်ယောက်မှ နေရာကမရွေ့တာကြောင့် ကျနော်တို့အိမ်သာအခန်းလေးရဲ့ တံခါးရွက်ကို ကျနော်ဆွဲစေ့လိုက်ပါတယ်။
နောက်တော့ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံပြည့်ဝတ်ထားတဲ့ သက်လက်ပိုင်းဘဲကြီးက ကျနော်တို့အခန်းဘေးအလွတ်ကနေ ကျော်ကြည့်ရင်းမှ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကာ “အိုကေ အိုကေ ငါသွားစောင့်နေပါ့မယ်” လို့ပြောပြောဆိုဆိုထွက်ခွာသွားပါတယ်။
ကွာတားဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားတဲ့ ငနဲလေးက သူ့ဘောင်းဘီရှေ့ဇစ်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ boxer ဘောင်းဘီတိုကို ထပ်မံဆွဲနှိမ့် လိုက်ပြီး သူ့ငပဲကိုအပြင်ထုတ်လိုက်တာ မြန်မှမြန်။ သူ့ငပဲက ဖြူဖျော့ဖျော့နဲ့ သေးသွယ်ပြီး အပေါ်ဘက်ကို လေးတစ်စင်းလို ကွေးတက် နေပါတယ်။
သူ ကျနော့်ကိုကြည့်သလို တက်ထိုင်နေတဲ့ငနဲရဲ့ မျက်နှာအမူအယာကိုမြင်ရအောင်လည်းအားထုတ်ပါတယ်။ အစကတော့ ဟိုကြည့် သည်ကြည့်ပေါ့ နောက်တော့ သူ့တို့ဖာသာသူတို့ လက်ကစား(-ွင်းထု) ကြပါတယ် ခပ်မြန်မြန်လေ။
ကဲအခုတော့ အိမ်သာထဲရှိနေသမျှ ငနဲတွေအကုန်လုံး ကျနော်လိင်ဆက်ဆံနေတာကို ၀ိုင်းဝန်းကြည့်နေကြပါပြီ။ ကျနော့်ငပဲကလည်း ခဏနေကလို ပေါင်နှစ်ချောင်းကြား ဂလိုင်ခေါက်မနေတော့ဘဲ ဆီးစပ်ကခြုံပုပ်ငယ်ဆီ အစွမ်းကုန်မတ်ထောင်ညွန်ပြနေပါတယ်။
သူတို့တွေ ကျနော်လိင်ဆက်ဆံနေတာကို ၀ိုင်းကြည့်ပြီး ပုံစံ ဆိုဒ်စုံငပဲတွေနဲ့ ကျနော့်ပေါင်ကြားက ခရေ၀ထဲအခုပဲ ထိုးထည့်ကြတော့ မယ့်အတိုင်း ဟန်ပြင်နေကြပါတယ်။
ဘယ်ဘက်ခြေထောက်မှာ တွဲရရွဲကျနေတဲ့ ကျနော့်ဂျင်းဘောင်းဘီကို ကျွတ်အောင်ချွတ်ပြီး ဘေးနားကန်ထည့်လိုက်ကာ ပေါင်တံတွေကို ကားနိုင်သမျှကားလိုက်တာပါပဲ။ နောက်တော့ အိမ်သာကြွေကမုတ် နောက်မှီကို အားပြုလဲလျောင်းနေသော အောက်ကဘဲကြီးရဲ့ ရင်ခွင် ထဲ အနည်းငယ်လှဲလျောင်းပြီး ပေါင်ကြားကညီဘွားနဲ့အတူ ရွှေဥတွေရဲ့အရင်းကို သေချာဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။
အခုတော့ ဘေးကရော ရှေ့ကရောဝိုင်းဝန်းမျက်စိအစာကျွေးနေကြတဲ့လူတွေအကုန် ကျနော့်ခရေထဲကို ငပဲထွားထွားတစ်ခု ဘယ်လို ၀င်ထွက်နေကြောင်း မြင်နိုင်ကြပြီပေါ့နော်။ အိုး…အ…အ သူတို့ကြည့်နေတာကို ဂရုစိုက်မနေတော့ဘူး အောက်မှာထိုင်နေတဲ့ငနဲကြီး နဲ့ အပေးအယူတည့်တည့် အထိုင်အထအကြွအရွလုပ်ပစ်လိုက်တယ် အခြားသူတွေက ကြည့်နေတဲ့ ခံစားချက်က ရင်ဘတ်ထဲတဒိန်းဒိန်း ခုန်ပေါက်နေရော။
ရှေ့တည့်တည့်က အတွဲတစ်တွဲက ရှေ့တိုးလာပြီး မြင်ကွင်းကြည်အောင်ကြည့်တယ်၊ မျက်နှာအမူအယာနဲ့ အသံအနည်းငယ်ပြုကာ ကျနော်တို့ကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်တယ်လေ။
ကျနော်လည်း အရှက်ပြေသူတို့ကိုပြန်ပြုံးပြလိုက်ရင်း ကျနော့်ခရေ၀ထဲဝင်ထွက်နေတဲ့ငပဲကြီး အဆုံးထိဝင်အောင်ဖိချက်လိုက် ထိပ်ပိုင်း ထိပေါ်အင် ဖင်ကိုကြွလိုက် စည်းချက်မြန်မြန်နဲ့ထိထိမိမိလှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်ပေါင်ကြားက ကိုယ်ပိုင်ညီဘွားခမျာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားမှု တင်ပါးဆုံရဲ့မွတ်သိပ်စွာတုန်ခါမှုတို့ကြောင့် ဒုံးပျံကြီးမလွှတ်တင်ခင် လှုပ်ရမ်းနေသလိုဖြစ်နေရပါရော။
ဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားတဲ့ငနဲက သဘောတကျရယ်မောလိုက်ရင်း “မင်းက နည်းနည်းညစ်တစ်တစ်နိုင်တဲ့ ကောင်လေးပဲ” လို့ပြောပါ တယ်။
ကျနော်တို့ရှေ့နားစုရပ်နေတဲ့လူတစ်စုနောက်မှာ ရပ်နေတဲ့ အသက်ခပ်ကြီးကြီး ဘဲကြီးဆီက “ဒီကောင်လေး ဘယ်လိုပေးရမယ် နေရမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတာပဲ…သူ့အိုးကလည်း တကယ့်ရှယ်” လို့စကားသံထွက်လာပါတယ်။
ကျနော်သူ့ကိုကြည့်ပြီး ရယ်ကျဲကျဲလုပ်ပြမိတယ်။ သူပြောတဲ့စကားက “ဒါပေမဲ့ ချာတိတ်လေးရေ မင်းကို အလှည့်အပြောင်း အတိမ်းအစောင်းလုပ်နည်းလေးတွေ ငါသင်ပေးလို့ရသေးသကွ” လို့ညွှန်းဆိုနေသလိုပါပဲ။
ရှေ့ကငနဲတွေ တစ်ယောက်ငပဲ တစ်ယောက်မသိမသာ ကြည့်နေကြတာ ကျနော်သဘောကျတယ်။ ဘောင်းဘီကိုအကုန်မချွတ်ကြဘဲ ရှေ့ပိုင်းဇစ်တွေ မျှော့ကြိုးတွေ ဖွင့်ချ လျှောချထားပြီး ငပဲကိုထုတ်ကိုင် ကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံနေတာကို သွားရေကျနေကြတာလေ။ သူတို့ငပဲဆိုဒ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြိုင်ဆိုင်နေကြပြီး ကျနော်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့ငနဲ ကိစ္စပြီးရင် ဘယ်သူအစားထိုးဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့ အနေ အထားပုံဟန်ပေါက်နေပါတယ်။
တန်းစီနေတဲ့သူတို့ထဲက ဘောင်းဘီတိုနဲ့ငနဲလေးကတော့ နေရာဝင်ယူမှာသေချာတယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခြားသူတွေထက်စာရင် သူက ပိုမိုစိတ်တက်ကြွနေသလို ရှေ့ကိုတိုးလာမယ်တကဲကဲဖြစ်နေတာ သိသာတယ်။ သူ့ငပဲကလည်း လူလေးနဲ့မလိုက် အတော်ထွားတာ ၈လက်မလောက်တော့ရှိမယ်။ တုတ်တာကလည်း လက်ကောက်ဝတ်နီးပါးပဲ။
သူ့ ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ငပဲကိုကိုင်ပြီး လက်ကစားနေတာ တစ်ချက် တစ်ချက် မီးရောင်နဲ့ လက်ကနဲ မြင်မြင်နေရတာက လက်သူကြွယ်မှာ လက်ထပ်လက်စွပ်ဝတ်ထားတာကိုလေ။ ကျနော် နည်းနည်းတော့ နင်သွားမိပါတယ်။
ကျနော့်အတွက် ဒီလိုဆိုဒ် ဒီလိုစတိုင်လ်ရှိတဲ့ငပဲနဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိဖူးဘူးဗျ။
ဟဲဟဲ….ကျနော် နွေရာသီအလည်အပတ်ခရီးပြန်လာတိုင်း ဒီ အိမ်သာကိုလာလာကြည့်တတ်တာတောင် မတွေ့ခဲ့ဘူး။ ဆိုဒ်ကြီးကြီးနဲ့များနေလိုက်ရရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲမသိဘူးနော်..ဟင်း။
အားကစားဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ ငနဲက ပထမဆုံး သုက်ရည်တွေဖွေးကနဲပန်းထုတ်ပါတယ်။
မထိန်းမချုပ် အော်ညည်းသလို သူ့ငပဲခေါင်းကိုထိန်းကိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ လက်ကိုလည်း သုက်ရည်တစ်စက်လောက်ကျန်တဲ့အထိ ပန်းထုတ်သည့်တိုင် မရပ်မနားကစားနေတော့တာဗျ။
သူ့ကိစ္စ ဇာတ်သိမ်းသွားသော်လည်း ကျနော့်ခရေ၀ထဲ အောက်ကငနဲရဲ့ပစ္စည်းကြီး အ၀င်အထွက်လျောကနဲ လျောကနဲဖြစ်နေတာကို ဆက်ကြည့်နေပါတယ်။ အိပ်မွေ့ချထားသူတစ်ယောက်လို မြင်ကွင်းမှာမြောနေပုံပေါ်တယ်။
မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံနဲ့ငနဲက ဘေးနားမှာရှိသောငနဲဘက်ကိုလှည့်စောင်းရပ်ရင်း အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနဲ့ပြုံးပြလိုက်တာကိုမြင်လိုက်မိတယ်။ မီးခိုး ရောင်ငနဲရဲ့ လက်တွေဟာ ဘေးကငနဲခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းတင်သားဆိုင်တွေကြား ၀င်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့။
ငနဲက အပြုံးမပျက် ဘူးဗျ သူ့ခရေ၀ထဲ မီးခိုးရောင်ငနဲ လက်ချောင်းတွေထိုးထိုးထည့်ပြီး ကစားနေတာကို အေးဆေးပဲ။ နောက်ကလက်ကစား သူက ကိုယ်ပိုင်ငပဲကို လက်နဲ့ကိုယ့်ဖာသာဆုပ်ကိုင်ကစားနေတာများ အားရပါးရပါ။
မြင်ရတွေ့ရကြားနေရတာတွေက ကျနော့်ကို ပိုမိုလှုပ်ရှားလာစေသလို လိင်စိတ်တက်ကြွပြင်းထန်စေပါတယ်။ ပေါင်ကြားက ညီဘွားခမျာ မာတောင့်လာတာများ ခဏနေကလို ခါရမ်းခြင်းမဖြစ်တော့ပါဘူး အပေါ်ကိုမတ်နေရော။
ကျနော့်ငပဲကို ဆွဲကိုင်ပြီး ခပ်သွက်သွက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်း အထက်အောက် စတင်လက်ကစားမိပါတယ်။
အောက်မှ အလိုက်သင့်ပင့်မြှောက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ငနဲရဲ့ ပစ္စည်းကြီး ကျနော့်ခရေ၀ထဲ ၀င်ထွက်နေတဲ့ဖီလင်ကိုပိုပြီး ရင်ခုန်နှစ်သက်လာ သလို ကိုယ့်ုငပဲကိုယ်ကိုင်ပြီး လက်သမားလုပ်ရတာကိုလည်း ပျော်ရွှင်လာပါတယ်။ ငနဲက ကျနော့်ခါးအစုံကို လက်နဲ့ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင် သူ့ငပဲကိုပင့်မြှောက်သွင်းပြီး “အဲ့ဒါပဲ….မိုက်တယ်…မင်းဖာသာမင်း(-ု) ခပ်သွက်သွက်၊ မင်း-င်ထဲ ငါပင့်ပြီးပန်းထည့်လိုက်ချိန် တစ်ပြိုင်တည်းပြီးရအောင်” လို့ဆိုလာပါတယ်။
ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ဆိုဒ်ကြီးငပဲပိုင်ရှင် ဘဲလေးက ခပ်ထွားထွားသူ့ဟာကြီးကို ဆွဲကိုင်လက်ကစားရင်း ကျနော်တို့အတွဲနားကို တိုးကပ် လာတယ်ဗျ။ ကျနော့်ခရေ၀ထဲတိုးဝင်နေတဲ့ ငပဲဆိုဒ်ကို သူအားမလိုအားမရဖြစ်နေသလား ဘာလားတော့မသိဘူး ကျနော့်တင်သား တွေကို လာညှစ်သလို အောက်က ငနဲရဲ့ ပေါင်တံတွေကိုလည်း ပွတ်တယ်လေ။
သူ့ဦးခေါင်းကို တဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ပြီး “Come on …ဆောင့်စမ်းကွာ” တဲ့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပါတယ်။
မလှမ်းမကမ်းမှာ ရပ်နေတဲ့ ခပ်သွယ်သွယ်ငနဲရဲ့ ပစ္စည်းကြီး အထက်အောက်လှုပ်ရှားရမ်းခါပြီးနောက် လေထဲကိုသုက်ရည်တွေ ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်တာ "Oh Jesus."တဲ့။
၀တ်ထားတဲ့ သူ့ဘောင်းဘီကတော့ မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံငနဲရဲ့လက်ချက်နဲ့အောက်ကိုနည်းနည်းလျောကျနေသလို တလှုပ်လှုပ် လက်ကစား နှိုက်ပြုနေတာ မပြီးတော့ဘူး။ တံခါးမကြီးနားစောင့်ပေးနေတဲ့ အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ ဘဲကြီးအနေနဲ့ကတော့ သူ့ရှေ့မလှမ်းမကမ်းက ငနဲလေး သုက်ရည်တွေ တဗြန်းဗြန်းပန်းထုတ်နေတာကို ၀မ်းသာအားရပြုံးပြီးကြည့်နေတာများ တကယ့်ကို နှစ်လိုလက်ရပါပဲ။
ကျနော့်စိတ်တွေတကယ်ထန်ရပါတယ်….ခရေ၀ထဲလက်ချောင်းတွေနဲ့နှိုက်ပြုကစားတာဟာ အမြဲလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်စိတ်ကြိုက် အာသာဖြေမှုတစ်ခုမို့ဖြစ်ပါတယ်။
ခပ်ယိုင်ယိုင်ထိုင်နေတဲ့ တက်တူးငနဲရဲ့ ပစ္စည်းထွားကြီးဟာ ကျနော့်ခရေ၀တလျောက် ပွတ်သပ်နှိုးဆွတိုးဝင်နေတာက ပိုမိုအရှိန်မြင့်လာပါ တယ်။
အိုး….သူ့သုက်ရည်တွေအပြည့် နွေးကနဲ နွေးကနဲ ပန်းထည့်စေချင်လိုက်တာဗျာ။
ကျနော် တဖြည်းဖြည်းအာရုံကပ်လာပါပြီ မကြာခင် ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုလေ။ ညီဘွားရဲ့သွေးကြောတွေ ဖောင်းကားလာသလို ရွှေဥတွေထဲတဗြစ်ဗြစ်မည်ရင်း ခရေကြွက်သားများသည်လည်း အတွင်းထဲရောက်နေတဲ့ ဧည့်သည်ကို အတင်း လည်ပင်းညှစ်နေပါပြီ။
ကျနော့်လက်တွေဟာ လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုး ပုံစံမျိုးစုံဖြစ်နေသလို မြင်းစီးသလိုခုန်ပေါက်မှုကြောင့် ကျနော့်ရွှေဥတွေဟာလည်း တရမ်းရမ်းနဲ့ လေထဲ ယိမ်းထိုးနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တည်နေပြီပေါ့။
ကျနော့်အသက်ရှူသံတွေ လှိုက်ဖိုနေသလို သက်ပြင်းရှိုက်သံတွေထွက်ရပြီး မျက်နှာတစ်ခုလုံးလည်း အမူအယာမျိုးစုံကိုဖြစ်လို့။
လူတိုင်းလိုလိုဟာ ကျနော့်ငပဲကိုစိုက်ကြည့်နေကြသလို ဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဘာတွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ သူတို့ရိပ်မိသိရှိနေကြ ဟန်တူပါတယ်။
သူတို့မျက်လုံးတွေဟာ ပြူးကျယ်လို့ ပါးစပ်တွေကလည်း ဟလို့ဗျာ။ ကျနော့်ရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ခပ်ထန်ထန်လှုပ်ရှားနေမှုကြောင့် ခရေ၀ထဲ အ၀င်အထွက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်နေတာရယ် လက်ကစားနေတဲ့ ကျနော့်ငပဲဆီက ဗြန်းကနဲပန်းထွက်လာမယ့် သုက်ရည်တွေ ဘယ်လို ထွက်လာမလဲဆိုတာ မြင်ကွင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကြည့်ဖို့ သူတို့ရှေ့ကိုပိုမိုတိုးကပ်လာကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းမှန်း မပြောတတ်တော့ဘူး။ အစတုန်းကတော့ ခပ်ရှက်ရှက်ရယ် အခုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်ရတာများ ဒိန်းတပ်တပ်ပါပဲ။
ခဏနေတော့ ကျနော့်ရွှေဥတွေ ဇိုးဇိုးဇပ်ဇပ်ဖြစ်လာပြီး လိင်တံတလျောက်ပြေးတက်လာကာ အရည်ဖြူဖြူများသည် သေးပေါက်သော အပေါက်မှတဆင့် ဗြန်းကနဲ ဗြန်းကနဲ ပန်းထွက်ပါတော့သည်ပေါ့။
ကပ်ကြည့်နေသော ငနဲလေးပါးစပ်က "Yeah!" တဲ့ ကျနော့်ငပဲက သုက်ရည်တွေပန်းထွက်လာတာကို သူမြင်ရတာကိုးလေ။
နောက်ကနေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင့်သွင်းနေသော ငနဲနှုတ်ဖျားကနေလည်း အော်ညည်းသံနဲ့အတူ တစ်စုံတရာဖြစ်တာလားမသိ မွတ်သိပ်စွာ ပင့်တင့်မှုကို ကျနော့်ခါးအစုံအား ညှစ်ကိုင်ပြီးပြုလုပ်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း ခပ်လျော့လျော့လှဲနေတဲ့ နောက်ကကိုကိုရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ မာန်လျော့သည့်သဘော လှဲမှီလိုက်တော့ ခရေ၀ထဲဝင်နေတဲ့ ငပဲရဲ့ ဖြစ်အင်ကို မြင်သူတကာတွေ ရှင်းကနဲ လင်းကနဲတွေ့လိုက်ရတာပေါ့နော်။
သူ့လက်မောင်းကြီးတွေနဲ့ ကျနော့်ရင်အုံတစ်ဝိုက် ရစ်သိုင်းဖက်တွယ်ရင်း လက်ကျန်သုက်ရည်တွေကို ခရေ၀ထဲရှိနေဆဲ ကွန်ဒုံးထဲကို အကြွင်းအကျန်မရှိ ပန်းထည့်နေပုံပါပဲ။
ကျနော့်အဆုံးသတ် မာန်တက်မှုအရှိန်ကျသွားပြီးနောက် ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကို မရွှေ့လိုက်ရင်း အပြင်က ပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းကြည့် နေသော ငနဲတွေ လှပထွားကြိုင်းတဲ့ ငပဲကြီး ကျနော့်ခရေ၀ထဲဘယ်လိုဝင်နေတယ်ဆိုတာ ရှင်းကနဲမြင်အောင်ပိုပြလိုက်ပါတယ်။
အောက်က ငနဲရဲ့ ရွှေဥတွေ အိမ်သာကြွေကမုတ်အဖုံးပေါ် ဘယ်လိုရှိနေတယ် သူ့ငပဲကြီးဟာ ကျနော့်ခရေ၀ထဲဘယ်လိုတိုးဝင် ပျောက်ကွယ်နေတယ်ဆိုတာ၊ ပြီးတော့ ကျနော့်ရွှေဥတွေနဲ့ အားကုန်နေသောညီဘွားကြီး ဘယ်လိုမေးတင်နေတယ်ဆိုတာ သုက်ရည် စိမ့်ထွက်နေတာတွေကို သူတို့ကြည့်နေစေချင်တယ်လေ။
မိနစ်မဆိုင်းပါဘူး တံခါးရွက်နားက ငနဲက တစ်စုံတစ်ခုပြောလိုက်တယ်နဲ့တူတယ် ကျနော်တို့အခန်းငယ်တံခါးနား ၀ိုင်းဝန်းရပ်ပြုနေတဲ့ သူတွေအကုန် ဟိုသည်လူစုခွဲသွားကြပါတယ်။
ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ငပဲထွားထွားကောင်ငယ်လေးကတော့ ကျနော့်နံဘေးက အိမ်သာအခန်းငယ်ထဲ အသက်ကြီးကြီးကွီးတစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်များနေတာကို သိလိုက်တယ်။
တံခါးမကြီးနားမှာရပ်နေတဲ့ ဘဲကြီးဆီက “ဆောရီးဗျာ…တံခါးက ကြပ်နေလို့…ကျုပ်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတာ ခဏလေးနော်” ဆိုတဲ့ စကားသံထွက်ပေါ်လာတော့ ငြိမ်ထိုင်နေရာက ကျနော်ထရပ်လိုက်ပါတယ်။ ခရေထဲက ငပဲကြီး ဘတ်လတ်ထွက်လာကာ လေအံသံ လည်း ထွက်လာပါရဲ့။
ကျနော်ဝင်နေတဲ့ အခု အခန်းငယ်လေးရဲ့တံခါးရွက်ကိုဆွဲစေ့ ကျောနဲ့မှီပိတ်လိုက်ပါတယ် တစ်စုံတစ်ယောက်တော့ အိမ်သာထဲဝင်လာဖို့ သေချာနေပြီမဟုတ်လား။
အိမ်သာသုံးစက္ကူကို ခပ်သွက်သွက်ယူ ကျနော့်ခရေ၀အနှံ့သုတ်သင်လိုက်ပြီး ခြေချင်းဝတ်ရောက်နေတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဆွဲတင်ဝတ် လိုက်ပါတယ်။
ခပ်ကြမ်းကြမ်းငနဲခမျာလည်း အိမ်သာပေါ်အမောဖြေထိုင်နေရင်းမှ သူ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲတင်ဝတ်လိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ သူ့ခေါင်းပေါ် က အညိုရင့်ရောင်ဆံနွယ်တွေဟာလည်း ချွေးတွေနဲ့အတူ စိုရွှဲလို့ပါ။ သတိမလွတ်ဘဲ သူ့ပစ္စည်းတွေ စစ်ဆေးယူငှင်နေပါရော။
ကျနော့်ကျောပိုးအိတ်ကို ပြန်လွယ်ပြီးနောက် သူ့ကိုကြည့်ကာ ခင်ခင်မင်မင်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။
သူက “အရမ်းကောင်း” တဲ့။
နောက်တော့ အိမ်သာအခန်းငယ်ထဲက ကျနော် လှစ်ကနဲပြန်ထွက်လာလိုက်ပါတယ်။
ကျနော့်လက်တွေကို ဘေစင်မှာဆေးနေတုန်း ကြည့်မှန်ကတစ်ဆင့်မြင်ရတာက အိမ်သာထဲမှာရှိနေတဲ့ ငနဲတွေ ကျနော့်ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးနေကြတာကိုပါပဲ။
ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ငနဲလေး သူ့အိမ်သာခန်းထဲကထွက်လာပြီး ကျနော့်နံဘေးမှာလာရပ်ကာ လက်ဆေးရင်း မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြသလို ပြုံးလည်းပြုံးပြပါတယ်။
ကျနော်လည်း သူ့ကို နွေးထွေးသောအပြုံးတစ်ခု အားရှိပါးရှိပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ်။
သူက “ဒီအိမ်သာ နေ့ခင်းအချိန်ဆိုရင် လူတွေအရမ်းရှုပ်တာပဲနော်” တဲ့ ညည်းသလိုပြောတော့
ကျနော်လည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း လက်အခြောက်ခံစက်ဘက်ကို လျှောက်လှမ်းလိုက်တယ်။
“ဟုတ်တယ်၊ ကျနော့်အထင် အဆင်ပြေပြေ ကဲလို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့နေမှာပေါ့”
သူ ရေဘုံဘိုင်ခေါင်းကို ပိတ်လိုက်ရင်း “ခင်ဗျား အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပေါ့ ဟုတ်လား” တဲ့မေးတယ်။
ကျနော်အပြုံးတစ်ချက်ပြုံးမိရရင်း “နေ့တိုင်း အချိန်မှန်”
သူလည်း ပြုံးကာ “အမိုက်စားပဲ” တဲ့ပြောပါတယ်။
ကျနော်လည်း အိမ်သာ သို့မဟုတ် သန့်စင်ခန်းက ထွက်ခွာလာတော့ အခြားသော လူအများစုဟာလည်း တပြုံးပြုံးဖြစ်နေတာကို မြင်ဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့မိပါသေးတယ်လေ။
Alex Aung (30 June 2016)
Posted by Alex Aung at 6:17 PM
How I Learned To Masturbate (Part I)